Nhoroondo mukugadzira: Trump naKim Jong-un kukwazisana maoko muSingapore
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Nhoroondo mukugadzira: Trump naKim Jong-un kukwazisana maoko muSingapore
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • vanhu • Singapore Kupwanya Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Mudzvanyiriri weNorth Korea, Kim Jong-un nemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump vasvika panzvimbo yemusangano kuSingapore. Musangano wekutanga wenhoroondo wevatungamiriri vaviri uchakurukura chibvumirano cherunyararo uye denuclearization yeKorea Peninsula.
Kim akasvika pekutanga kuCapella Resort, iri kuSentosa Island yeSingapore, nguva pfupi nguva dza9 isati yakwana. Haana hanya nemakamera, achipinda muhotera akabata magirazi emeso. Mutungamiri weUS akatevera maminetsi mashoma gare gare, achitendeukira kumeso kumakamera nekutaura kwakanyatsoita zvematongerwo enyika asati apinda munzvimbo.
Kubata ruoko kwakaitika kwevatungamiriri vaviri pamberi pemutsara weU.S. uye North Korea kwakaitika na9: 04. Mutungamiriri weUS akanyemwerera ndokubata Kim kumusana, achimuendesa kunzvimbo yemusangano. VaTrump vakati pakutanga vaizoziva kana musangano uyu uchizobudirira mukati memaminetsi ekutanga ekuonana naKim.
"Tichava nehukama hwakanaka, handina mubvunzo," akadaro Trump muchidimbu chemufananidzo-op.
"Maitiro ekare uye rusaruro zvaive zvipingamupinyi munzira yedu yekuenda kumberi, asi takavakunda vese uye tiripo nhasi," akadaro Kim. "Ichokwadi," akadaro Quump.
Ivo vaviri vakarongerwa kusangana kwemaawa maviri vari vega, vachiperekedzwa nevashanduri vavo chete.